कोरोनाको तेस्रो लहर सुरू, होला त लकडाउन ? - ramechhapkhabar.com
कोरोनाको तेस्रो लहर सुरू, होला त लकडाउन ?
नेपालमा साउन अन्तिम सातादेखि मन्थर हुँदै गएको कोभिड १९ संक्रमण दर फेरि तीव्र रुपमा फैलन थालेको छ । केही समय यता संक्रमण घट्दै गएर जनजीवन सामान्यतर्फउन्मुख भइरहेको थियो ।
अबको केहि दिनसम्म पनि निरन्तर यसरी नै संक्रमण बढ्दै गयो भने तेस्रो लहर सुरु भयो भन्न सकिने उनी बताउँछन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तेस्रो लहरको बारे भनिहाल्नुपर्ने अवस्था नआइसकेको बताएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा मिश्राले कोभिड १९को तेस्रो लहर सुरु भइनसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले आधिकारिक रुपमा केही घोषणा गरेका छैनौं । संक्रमणदर बढेको छ । तेस्रो लहरको बारेमा अहिले भनिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेको छैनौं । हामीले भनेका छैनाैं ।’ शर्मिला पण्डित, नेपाल प्रेस